“ဤခရီး နီးသလား၊ ငါးနာရီ လာရ၏။ မီးရထား စီးလာပါ။ အလားကားမစီးရ။”
စီးရမည့် ယာဉ်၊ ကြာမည့်အချိန် သိနိုင်သော ခရီးမှန်း မသိနိုင်အောင်ပင် ဖြူစင်လွန်းသော အရွယ် ငယ်ငယ်က ရွတ်ဆိုခဲ့သော စာသားများ ဖြစ်ပါသည်။
စက္ကန့်သံကို ခိုစီးရင်း လိုက်ပါလာခဲ့သည်မှာ မေးခွန်းများစွာ ရှေ့မှာ စောင့်ကြိုနေကြသည်လား။
ယခု……. ကျွန်တော်သွားနေသော ခရီးကရော… ဘယ်ခရီးပါလဲ…၊ ဘယ်ရထားနှင့်ပါလဲ…..၊ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမှာပါလဲ….. ဘယ်လောင်စာနှင့် မောင်းနေပါသလဲ…. …။ မေးခွန်းများစွာပါ……။
အဖြေကို စဉ်းစားရင်းနှင့်ပင် ဖြစ်သန်းခဲ့သော မိုင်တိုင်များစွာ….. ဖြတ်သန်းရဦးမည့် ဘူတာများစွာ…. ခရိးများစွာ….. ရှေ့မှာ….။
ထောက်မစွာ ဖေးကူခြင်းများ…….တောက်ပအောင် လင်းစေခြင်းများ…….
ရှေ့ဆက်ရမည့် ခရီးများ…….နင်းဖြတ်ရမည့် ခရီးများ…….
လောင်စာကို ညှိနေရပေမယ့်…….ခရီးတော့ သိပါရစေ…….
သတိတွေ ရှိနေရပေမယ့်…….ဆန္ဒတွေ မိပါရစေ…….
မောင်းနှင်နေရတဲ့…….ရင်ကို သိမ့်သိမ့်လှိုက်စေတဲ့ ခရီးများရယ်.....